फोरम र नयाँ शक्ति एकता वार्ता : नेतृत्वको मोडल –वरिष्ठतम् भट्टराई, कार्यकारी यादव – Saurahaonline.com
फोरम र नयाँ शक्ति एकता वार्ता : नेतृत्वको मोडल –वरिष्ठतम् भट्टराई, कार्यकारी यादव
काठमाडौँ, बैशाख १८ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीचको एकताको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी दुई शीर्ष नेताले पाएका छन् । एकताका लागि गठित राजनीतिक संवाद समितिले विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वका विषयमा दुई शीर्ष नेतालाई सुझाव बुझाई सकेको छ । फोरमले सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र नयाँ शक्तिले नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर छलफल गरेका थिए ।
दुई पार्टीले निर्माण गरेका समितिबीच पटक पटक छलफल भएर विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वका विषयमा तयार पारिएको सुझाव शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाई सकेको एक नेताले बताएका छन् । नयाँ शक्तिका नेता नवराज सुवेदीले पार्टी एकताका खाका बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूले पुरा गरेको र शीर्ष नेतालाई सुझाव दिइएको बताए । उनले भने ‘फाइनल टस गर्न बाँकी छ । अब छिट्टै हाम्रा संयोजक बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र जी बसेर टुङ्गो लगाउनु होला ।’
दुई अध्यक्ष रहने सहमति !
एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाउने वा सर्वोच्च नेता बनाउने भन्ने विषयमा यादव र भट्टराईले निर्णय गर्ने भएका छन् । दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताबीचको छलफलमा भने दुई अध्यक्ष रहने सहमति भएको छ । श्रेष्ठ र सुबेदी नेतृत्वको संवाद समितिमा भएको उक्त सहमति केहीं दिन अघि अध्यक्ष यादव र संयोजक भट्टराईलाई बुझाईएको छ ।
स्रोतका अनुसार नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाने र कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्रलाई मान्न तयार भएका छन् । एकीकृत पार्टीको दुई अध्यक्षमा वरिष्ठतामा भट्टराई अगाडि रहने भए पनि उनको जिम्मेवारी कम हुनेछ । ‘अब भट्टराईले के जिम्मेवारी लिनु हुन्छ भन्ने विषयमात्र टुङ्गो लगाउन बाँकी छ’, स्रोतले भन्यो ।
नयाँ शक्तिका नेता सुवेदीले दुवैलाई सम्मान हुने गरी नेतृत्वका विषयमा सहमति हुने बताए । उनले भने ‘सन्तुलन कायम गर्ने गरी अर्थात् पावर सेयरिङ्ग हुने गरी नेतृत्वको टुङ्गो लगाउँछौँ । हामीले त्यही सुझाव दिएका छौँ । अब दुई शीर्ष नेताले फाइनल टच गर्नुहुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्ष रहने विषयमा यादव र भट्टराई पनि सहमत भएका छन् । अझै पनि सर्वोच्च नेता वा वरिष्ठ नेताको रूपमा रहन यादवले भट्टराईलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
वार्ता प्रक्रियामा रहेका संघीय समाजवादी फोरमका एक नेताले कार्यकारी अध्यक्ष यादव हुँदा भट्टराईलाई आलंकारिक अध्यक्ष मान्न आफ्नो पार्टीलाई अप्ठ्यारो नभएको बताए । ‘कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्रजी हुँदा आलंकारिक अध्यक्ष बाबुरामलाई मान्न हामीलाई समस्या छैन । उहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेकाले उपेन्द्रजी भन्दा माथि हुँदा समेत समस्या हुँदैन’, ती नेताले भने, ‘सङ्गठनात्मक अवस्थाले गर्दा पनि कार्यकारी भूमिकामा यादव रहनु हुन्छ । हामीबिच त्यही कुरा फाइनल भएको छ ।’
अबको केही दिनभित्र नै पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी दुई पार्टीको छ ।
यादवलाई कार्यकारी अध्यक्ष मान्न भट्टराई तयार भएपछि फुक्यो एकताको गाँठो
दुई वर्षअघि नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि रोकिएको फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकता यादवलाई कार्यकारी अध्यक्ष मान्न भट्टराई तयार भए लगत्तै निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । चुनाव चिह्न, झन्डा र पार्टीको नामका विषयमा समेत दुई पार्टी सहमत भएका छन् । दुई पार्टीबीच नयाँ समाजवादी पार्टी वा नयाँ समाजवादी फोरम पार्टी नेपालमध्ये एक नाम राख्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
चितवनमा ८४ प्रतिशत बढि कोरोना संक्रमित निको २०७७, १० मंसिर बुधबार
पोखरामा ‘राजा आउ, देश बचाउ’ नारा घन्कियो २०७७, १० मंसिर बुधबार
एकै दिनमा २८ कोरोना संक्रमितको मृत्यु २०७७, १० मंसिर बुधबार
पछिल्लो २४ घण्टामा १९४८ कोरोना संक्रमित थपिए २०७७, १० मंसिर बुधबार
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपाने पक्राउ २०७७, १० मंसिर बुधबार
मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना २०७७, १० मंसिर बुधबार
पोखरा : गणतन्त्रले देश नै बेच्न लागेको भन्दै हजारौं युवाहरु बुधबार पोखरामा ‘राजतन्त्र जिन्दावाद’ को नारा.....
एकै दिनमा २८ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा १९४८ कोरोना संक्रमित थपिए
बर्दिवास घटना : मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
लैंगिक समानता नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन्छ : प्रधानमन्‍त्री